Somaliland: Xiisad Cakiran Oo Ka Dhex Aloosan Hogaamiye Xirsi Iyo Gudoomiyaha Ku Meel Gaadh Ka Ah + Xildhibaan Jirde Oo Dudmo Ugu Maqan Ingiriiska Iyo Xaalka Waddani Oo Noqday Xorriyo Nin Gayaa Ha Guursado - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Xiisad Cakiran Oo Ka Dhex Aloosan Hogaamiye Xirsi Iyo Gudoomiyaha Ku...
Xildhibaan Cabdiqaadir Jirde Iyo Xirsi Oo Madaxa Iskula Jira, Cabdiraxman Cirro oo Dhuumasho Dhabarku Muuqdo Kaga Maqan
Khilaafkii ugu baaxada cuslaa ayaa dhex miranaya labada shaqsi ee ku mataanaysan xilalka Waraabo taaga ah ee Gudoomiyaha ku meel gaadhka ah ee xisbiga Waddani iyo Hogaamiyaha xisbiga Mucaaradka ah ee Waddani Cabdiqaadir Jirde iyo Xirsi Cali Xaaji Xasan waxaana khilaafkaasi oo mudooyinkii u danbeeyey huursanaa uu dibada u soo baxay isaga oo baaxaa degaya heerkii ugu sareeyey oo dudmo maraya.
Cabdiqaadir Jirde oo ah Gudoomiyaha ku meel gaadhka ah ee xisbiga Waddani iyo Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa isku maan dhaafsan awooda xilalka ay hayaan oo shaqo ahaan isku mid ah balse magaca lagu kala duway.
Gudoomiyaha Xisbiga Waddani ayaa aamusnaan kaga jawaabay khilaafkaasi oo marxalado kala duwan soo maray isaga oo hanaan dhuumasho ah awoodii xisbiga ugu wareejiyey Xirsi Cali Xaaji Xasan oo hogaamiye ka ah xisbiga mucaaradka ah ee Waddani isla markaana waxa uu ku gacan saydhay sida la sheegayo dalabyo uga yimi Musdanbeedka gooya talada xisbiga oo damcay in arinta lagu dhameeyo ardaaga Musdanbeedka.
Cabdiqaadir Jirde ayaa dudmo kaga baxay magaalada Hargeysa waxaana uu xiligan ku sugan yahay magaalada Liverpool ee cariga Wadanka Ingiriiska isaga ka xadhko xidhay xisbiga WADDANI oo uu sheegay in uu af duuban yahay Xirsi Cali Xaji Xasan guud ahaana la af duubtay siyaasadii is bedel doonka ku calaamad sanayd ee Murashax Cirro kursiga Madaxweynaha ku doonayey Siilaanyo dabadii.
Xudunta Khilaafka Jirde Iyo Xirsi ayaa salka ku haya awood qaybsiga labada xil oo hal xil isku ah Ninka awooda lehna Cirro iyo xubnaha uu ka talo qaataa u doorteen inuu noqdo Xirsi Cali.
Arintan ayaa la mid ah adhax jabintii lagu sameeyey Gudoomiye ku xigeenkii xisbiga WADDANI ee Murashaxu ka doortay Siyaasigii jug so dhacayda ahaa ee xisbiga aan meelna u soo marin waxaana iminka Cirro uu Cabdiqaadir Jirde ka doortay Xirsi Cali Xaji Xasan oo xisbiga Waddani dhawaan ku biiray.
Sida wararku sheegayaan khilaafka ayaa la sheegayaa in uu ku biyo shuban doono Is-casilaad uu Jirde xisbiga banaanka uga baxo inkasta oo Murashaxa Waddani doonayo in uu siyaasadii qosolka arinta xalkeeda ku dhameeyo.
Somaliland: Tartanka Ciyaaraha Gobolladda Somaliland – Xaysimo Vs Saaxil LIVE HD